Manoratra Bilaogy Any An-tsesitany · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 10 Avrily 2018 20:57 GMT
I Sebastian Delmont, teratany Venezoelana iray monina sy manoratra bilaogy ao New York ankehitriny, no nanoratra ity lahatsoratra ity tamin'ny teny Espaniola. Navoaka tanatin'ny adihevitra voalohany (sady tokana) an'ny Gazetiboky Weblog izy io, saingy afaka vakiana ao amin'ny Zona Greek ihany koa, izay bilaogy faharoan'i Delmont. Manaraka ny lahatsoratra, hitanisa bilaogera Latino-Amerikana samihafa izay monina ivelan'ny tanibe aho. Dikateny nataon'i Linda Evarts.
Noho ireo antony vitsivitsy izay hodiako tsy fantatra akory, olona nandao ny firenena niaviany mba hitady sehatra vaovao ny ankabetsahan'ireo bilaogera fanta-daza indrindra. Ireo Venezoelana any New York, ireo Amerikana any Madrid, ireo Ekoatoriana any Meksika, ireo Arzantina any Barselôna, ireo Espaniola kosa any Montevideo, raha tsy hitanisa afa-tsy ireo. Ary na dia nilaza aza aho fa tsy hilaza ho mahalala ireo antony, tsy manakana ahy – amin'ny maha-bilaogera tsara ahy – ny handroso petrakevitra vitsivitsy mba hiezahana handany ny andro.
Raha misy ny fifandraisana, telo no tantara mety hitranga: vokatry ny bilaogy ny sesitany, vokatry ny sesitany ny bilaogy, na vokatry ny antony hafa ny bilaogy sy ny sesitany. (Ireo izay tena mahafantatra mikasika ny antontanisa dia hahatsapa fa tsy noraisiko ny mety tsy hisian'ny fifandraisana mihitsy eo amin'izy ireo. Ireny olona ireny dia tsy afaka ny hahita ny esoeso miraikitra anatin'ity lahatsoratra ity na koa ny tsy fahampianà fomba fiasa siantifika na dia eo aza ny sarintsarim-peo ôfisialy, ary tsy hiraharaha azy ireo isika.)
Ho an'ny maro, lasa varavarana hisokafana amin'ny ambin'izao tontolo izao ny bilaogy. Amin'ny fanoratana bilaogy, manasa ny olon-kafa hahalala ny fiainanao ianao, ary tsy azo ialàna ny fifamalian'io fihetseham-po io. Any am-parany, mamaky ny bilaogin'ny hafa ianao ary mahita ny fiainan'izy ireo any amin'ny toeran-kafa. Rehefa manoratra zavatra mitaraina momba ny fitateram-bahoaka ao an-tanànanao ianao, tsy maintsy misy olona mamela tsikera izay azo fintinina amin'ny hoe “mahafinaritra kokoa ny fiainana aty an-tanànako”. Farany, manjary tsy vitanao ny tsy hiraharaha ny tsindry, ka manomboka liana hahalala ny tontolo hafa ivelan'ny lalambe misy anao amin'izay ianao, ary tsy ho tonga saina akory ianao fa volana vitsivitsy aty aoriana, lasa mifindra any amin'ny morontsiraka hafa.
Ireo hafa, kanefa, efa liana talohan'ny nanombohany ny bilaoginy. Maro ireo nifindra izay vao nanomboka nanoratra. Anatin'ny fahanginana any an-tanàna vaovao sady hafahafa, zary lasa fifandraisana virtoaly amin'ireo namana tranainy, ireo fianakaviana, ary amin'ireo toerana fantatra ny bilaogy. Na ireo mankafy ny fiainany vaovao aza dia mahita fitaovana tonga lafatra ao anatin'ireo bilaogy mba hitazonana ny fifandraisan'izy ireo amin'ny olona any an-tanàna. Tsy ilaina ny mandany ora maro amin'ny finday hanazavana amin'i Neny ny endrik'ilay efitrano vaovao, ka hanao toy izay amin'ny dadatoa sy amin'ny namana taloha koa avy eo. Afaka apetrakao anatinà bilaogy fotsiny izany ary mankafy ny fotoana rehetra voatahirinao mba hisotroana labiera eo amin'ny café eo anjorony eo ianao.
Angamba mety tsy misy fifandraisan'antony sy vokany eo amin'izy roa. Mety ho samy vokatry ny zavatra hafa ny fanoratana bilaogy sy ny fanaovana sesitany ny tena. Angamba manoratra bilaogy isika mba hahitàna zava-baovao ary izay antony izay ihany no mahatonga antsika hitsidika tany vaovao. Angamba ilay toe-tsaina izay mitarika antsika hanoratra mikasika ny toetrandro na izay nohanintsika nandritra ny sakafo maraina ihany no tompon'andraikitra amin'ny fampirisihana ny faniriana hiaina anatinà firenen-kafa.
Saingy taorian'ireo fanadihadiana maro loatra, tonga taminà tsoakevitra iray aho, izay mety tsy heken'ny rehetra ho mitombona, kanefa raha avelan'izy ireo any aorianany ny hambony ary mandinika ny tenany izy ireo dia ho tsapany fa marina izany. Mino aho fa ireo bilaogera rehetra monina any ivelany dia miala noho ny fikatsahana toeram-baovao mba hahazoana zavatra hosoratana fotsiny ao anaty bilaoginy, ary koa satria tsy misy fomba tsara hahazoana fifandraisana vaovao mihoatra nòho ny fakàna namana vaovao anatinà tanàna vaovao. Sahiko ny milaza fa mifindra monina any ivelany mba hikatsaka lahatsoratra vaovao sy laharam-pejy tsara kokoa ireo bilaogera.
Ireo Latino-Amerikana Manoratra bilaogy avy any ivelany:
Iria Puyosa: Venezoelà -> Etazonia
Vicente Ulive-Schnell: Venezoelà -> Frantsa
Tiempo Conjugado: Però -> Etazonia
La Otra Orilla: Panamà -> Israely
Marie Aiden: Costa Rica -> Hôlandy
José Luis Orihuela: Arzantina -> Espaina
K-Minos: Venezoelà -> Bangladesh
Martin Varsavsky: Arzantina -> Espaina
Día a día: Kôlômbia + Venezoelà -> Bangladesh
Julio Sueco: Meksika + Etazonia -> Soeda
Argenautas: Arzantina -> Izao tontolo izao
Jonathan Molea: Venezoelà -> Nizerià
Chilenos en Alemania: Shilia -> Alemaina
Álvaro Ramírez Ospina: Kôlômbia -> Norvezy
Afrael: Venezoelà -> Etazonia
Juliana Forero: Kôlômbia -> Etazonia
Gedanken Bilingual: Venezoelà -> Alemaina
Diego Sarraseca: Arzantina -> Etazonia
Rayas y Palabras: Venezoelà -> Espaina
Strolling Luna: Meksika -> Etazonia
Almada de Noche: Bôlivia -> Frantsa
Eduardo Arcos: Ekoatora -> Meksika